Ụbọchị My Pet » Ileta Key West, Florida na gị Pita
emelitere ikpeazụ: Aug. 13 2020 | 2 min agụ
Ikekwe Pet friendliest City ke United States!
Key West, mgbe ụfọdụ a maara dị ka Conch Republic, bụ ụwa si ya. Emi odude ke nsotu n'ókè nke Florida Igodo, ọ maa depụta ka kwaa nke a dị iche iche oku igba.
Ọ bụrụ na ị na-achọ a ukporo ikuku, ebe a bụ dị ka ihe ọma dị ka ọ na-akawanye. Na ịma mma jupụtara n'ebe nile ị na-ele si emerald acha anụnụ anụnụ / green mmiri oké nke ọdịda anyanwụ na ala okooko osisi hibiscus okooko osisi na ọwọrọiso Igodo ije. Nke a bụ ebe ka mba ndị ọzọ n'ụwa.
Ma ihe ihe anyị na-ejegharị Pita nwe, ebe a bụ dị ka Pita enyi na enyi dị ka ọ na-akawanye.
Ọtụtụ ụlọ na Key West bụ nke nta ụdị, obere Ụlọ ndị njem, bed na breakfasts, cottages na ndị dị otú ahụ. Key West si Center Court – Akụkọ njem & Cottages bụ ihe nlereanya zuru okè nke Pita enyi na enyi ụlọ n'ebe a na Key West.
Center Court awade pụrụ iche, pụrụ iche, ala na oké ọnụ ụlọ, oke ime ụlọ, Villas, bu condos na cottages, nzọụkwụ si Duval Street. Ọtụtụ nwere onwe Jacuzzis maka ihunanya getaways ma ọ bụ ọbụna a onwe ọdọ mmiri! Anu ulo bụ karịa gị, ha na-adored! Gwa a pụrụ iche na-emeso n'elu ịlele maka gị anọ-legged enyi.
Gị Pita nwere ike chọrọ igwu egwu na otu n'ime ihe anọ bi na nkịta ndị na-niile dị ka tọrọ azụ dị ka Key West onwe ya.
Enyi na enyi na ihere mkpara ga-arụ ọrụ ike iji mee ka ọnụnọ gị ọzọ na-atọ ụtọ. Pịa na www.centercourtkw.com ele ha website.
Inweta a stroll na gị Pita na-agaghị abụ nsogbu. Key West bụghị ihe karịrị iri na abuo blocks ọ bụla nduzi na-a bu n'ihi na akpagharị na ndị na-ekiri. Nza nke weghachiri eweghachi ochie obibi, ụlọ ahịa, artists, ogige, ihe niile ị chọrọ ịhụ, na gị Pita ga-anabata gị gaa.
Ọbụna na-eri nri Key West bụ a Pita enyi na enyi na-eme. Tinyere Duval n'okporo ámá ndị a iri na abuo ụlọ oriri na ọṅụṅụ ebe gị Pita ga-anabata gị ma nye pụrụ iche ọgwụgwọ. Gị nchịkọta akụkọ bụ n'ebe na-adịbeghị anya na ya Pita nkịta, Ruggles. Anyị na-eje ije otu n'ime ndị Pita enyi na enyi ụlọ / ụlọ oriri na ọṅụṅụ, na anyị na-agafe ihe mara mma French ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-enyocha ndị na-menu. Otu ase e mere ma Ruggles ga-welcome. Azịza ya, “Ọ ga-amasị ibe anụ ma ọ bụ ọkụkọ?”
Ele niile nke Pita enyi na enyi ebe ịnọ na iri nri na Key West nnọọ na-aga www.pettravel.com/Destinations/KeyWest_FL.cfm.
Ọ bụrụ na ị adịghị ebi ndụ Florida, i nwere ike iji ofufe n'ime Miami n'ọdụ ụgbọ elu.